Blogger of this week : Urmila Thapaliya - MeroReport
Blogger of this week : Urmila Thapaliya
उर्मिला थपलिया, युवा-बिद्यार्थी माझ लोकप्रिय नाम हो । युवा-बिद्यार्थी राजनीतिबाहेक बिभिन्न सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय उर्मिलाले साहित्यिक कृति (कविता) बाहेक 'मरेर पनि अमर गिरीजाबाबु' नामको संस्मरणात्मक लेखहरुको संकलन सम्पादन पनि गरेकी छिन ।
उर्मिला थपलियाको घर धादिङ् हो । हाल उनी काठमाण्डौ कलंकीमा बस्छिन्। उनको परिवारमा आमाबुवा, बहिनीहरु हुनुहुन्छ । उनी साहित्य लेखन र राजनितीमा रुची राख्छिन । उनको विचारमा राजनिती भनेको आफुले बुझ्ने र बुझाउने कुरा हो । उनी अहिले राजनिती सिक्ने क्रममा छिन। बिभिन्न सामाजिक बिषय समेटेर उपन्यास लेखनमा सक्रिय उर्मिलाका गजल हिजोआज सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पनि लोकप्रिय हुन थालेका छन् । आफ्ना तीनै गजल र कथाहरु मिश्रीत ब्लग http://urmilathapaliya.blogspot.com/ पनि छ जुन उर्मिलाले केही बर्षदेखि निरन्तर रुपमा साहित्यिक ब्लगिङको रुपमा पाठकमाझ प्रस्तुत गरिरहेकी छिन । राजनीतिमा सक्रिय युवापुस्तामा उर्मिलाजस्ता व्यक्ति औलामा गन्न सकिन्छ जसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर मार्फत पनि आफुलाई सक्रिय बनाएका छन् ।
यो हप्ताको ब्लगर अफ द विकमा, आत्मसन्तृष्टिका लागि राजनीति, साहित्य तथा समाजसेवामा उत्तिकै सक्रिय उर्मिला थपलियालाई प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईंको ब्लगको बारेमा केहि बताइदिनुस न ?
म मेरो ब्लगमा कथा र कबिता लेख्छु प्राय: । मैले पहिलो पटक कथा लेख्न प्रयास गरेको थिएँ । त्यो त्यति राम्रो नभएपनि मैले आफ्नो ब्लगमा राखेको थिएँ । त्यसबाट मलाई धेरै फिडब्याक पनि आएको छ । मेरो लागि ब्लग लेख्न सिक्ने एउटा थलो हो ।
करिब डेढ बर्ष जति भयो होला । मेरो भाइले खोलिदिएको हो । केही बर्ष पहिले इक्वल एक्सेस, युथएक्सन र इन्टरनेशनल अलर्टको एउटा कार्यक्रममा दाङमा थिए, त्यहा युवा र सोसल मिडियाका बारेमा विनय गुरागाईजीले क्लास लिनु भएको थियो, त्यहाँबाट धेरै सिके । त्यसपछि मैले कबिता, गजल र आफ्नो मनमा लागेका कुराहरु लेख्न थालेँ ।
ब्लग आफ्नो पर्सनल साइट भएकोले गर्दा आफ्नो सबै कुराहरु त्यहाँ राख्न सकिन्छ । सबै कुराहरु सार्वजनिक स्थानमा राख्न सकिन्न । त्यसैले ब्लगमा सधै भरी स्थायी रही रहने, हेर्न पनि सहज हुने , आफ्नो लामो मेसेज पनि राख्न सकिने, आफ्नो भनाइ राख्न मिल्ने भएकोले मैले ब्लगिङ रोजेँ ।
तपाईंलाई आफ्नो ब्लगमा लेख्न के कुराले प्रेरित गर्छ ?
प्रायजसो समाजको घटनाहरुले र साथीको संगतबाट । दिनभरि साथीहरु भेटघाट हुन्छ, चिया कफी खाँदा गफगाफ हुन्छ त्यसले पनि मलाई केहि सिकाइरहेको हुन्छ । कतिपय घटना आफुले भोगेका व्यक्त गरेको छु । कतिपय साथीको समस्यालाई पनि लेख्ने गरेको छु । मैले साथीको संगत र देखेका कुराहरुबाट प्रेरित भएर लेखेको हुन्छु ।
ब्लगिङमा कतिको समय दिनुहुन्छ ?
हरेक दिन त्यस्तै आधी घन्टा जति । इन्टर्नेट चलाउदा ब्लगिङ पनि गर्छु ।
पछिल्लोपटक आफ्नो ब्लगमा के राख्नु भयो ?
मैले नारी भन्ने कबिता राखेको छु । नारीको बिषयमा दुइ-चार लाईनहरु लेखेको छु । एकदिन एकजना महिला साथीसँग कुरा गर्ने क्रममा उनको पारिवारिक समस्याको बारेमा कुरा भयो । परिवारमा के-के समस्या भोग्नु पर्छ एउटा नारीले त्यो मैले पनि भोगेको छु । त्यसमाथि पनि एउटा विवाहित महिलाले के-के कुरा भोग्नु पर्छ भन्ने छलफल हुँदा रेस्टुराँमा लेखेँ र पोस्ट गरेँ ।
राम्रो छ । ब्लगमा प्रतिकृया लेख्ने भन्दा पनि फोनमा धेरै प्रतिकृया आउने गर्छन । तपाईंले ब्लगमा लेख्नु भएको रहेछ एकदम राम्रो छ जस्ता प्रतिकियाहरु पाउँछु । म अधिकांश निराशावादी कविता लेख्ने गर्दछु । त्यस्तो कबिता भन्दा आशावादी कविता देख्न पाइयोस भन्नुहुन्छ प्रायले ।
ब्लग धेरै समुहसम्म पुगेको छैन । इन्टर्नेट चलाउने, सोसिअल मिडिया चलाउने व्यक्तिलाई पनि ब्लग सहज छ, यो हाम्रो पहुँचको कुरा हो भन्ने अलि कम जानकारी छ । यस बारेमा बढी भन्दा बढी जानकारी दिन सकियो भने यसले प्रभाव पार्न सक्छ । ब्लगिङले प्रभाव पार्नको लागि यसको प्रयोगकर्ता बढ्नु जरुरी छ । यसको लागि एउटा अभियानको जरुरी छ । जो इन्टर्नेटको पँहुचमा छन उनीहरुलाई ब्लग चलाउन सजिलो छ, यो आफ्नो कुराहरु व्यक्त गर्ने माध्यम हो भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।
के ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ?
मान्छे आफ्नै अनुशासनको घेरामा छन भने उनीहरुलाई आचारसंहिताको जरुरी हुँदैन । आफ्नै अनुशासनको घेरामा छैनन भने उनीहरुलाई आचारसंहिताले केहि गर्दैन । आचारसंहिताको साथसाथै दन्ड भयो भने अलिकती सतर्कता अपनाँउछन होला । आचारसंहिताले मात्रै मान्छेहरु सकारात्मक हुन्छ भन्ने लाग्दैन त्यसको लागि दन्ड पनि जरुरी छ । युवाहरुले बनाएको अचारसंहिता उल्लङ्घन गर्‍यो भने के हुन्छ त, कारबाही गर्ने केहि प्रावधान छ कि यो पनि एउटा समस्या हो ।
अब सोसिअल नेट्वर्किङ साइट र बिशेषगरी फेसबुकको कुरा गरौँ । फेसबुकलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ? तपाइको फलोअर कति छन ?
खासगरी सुचनाकै लागि प्रयोग गर्छु । मेरो फेसबुकमा सबस्क्राइबर एघार हजार जति होला र साथीहरु चाँही तीन हजारको हाराहारीमा हुनुहुन्छ । अधिकांश मेरो राजनैतिक साथी हुनुहुन्छ । कोही मलाई माया गर्ने साथी हुनुहुन्छ भने कोही साहित्यिक साथी हुनुहुन्छ ।
साधारणतया के अपलोड गर्नु हुन्छ र कति कति अवधिमा ?
म दुइ-तीन दिनमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु । कहिलेकाही सुचनाहरु, केहि कार्यक्रमहरुको जानकारी, कविता र गजलहरु र अरु बिभिन्न कुराहरु जसलाई राख्दा मलाई खुशी र सन्तुष्टि हुन्छ । अधिकांश मेरो साथीहरुले मेरो कविता र गजल पढ्न रुचाँउछन । बिशेष गरेर मेरो कबिता र गजलबाट धेरै राम्रो प्रतिकृया आउँछन ।
फेसबुकसँग केही गुनासाहरु पनि छन् नी खासगरी यसलाई चलाउँदा गरिने दुरुपयोगको बारेमा, के भन्नुहुन्छ?
फेसबुकमा देखिएको बिकृतीले गर्दा एउटा अपराध भइराखेको छ । केटीको नाममा खोल्ने अनेक तरिकाले धम्की दिने, मलाई पनि धेरै त्यस्तो सन्देशहरु आएको छ । मेरो फ्रेन्डसिप रिइक्वेस्ट एक्सेप्ट गर भन्ने जस्ता धम्किपुर्ण सन्देश आउने गर्दछ । विकाससँगै चुनौती पनि थपिन्छ, अपराध पनि थपिन्छ । मान्छेहरु नयाँ कुराको प्रयोग गर्न चाहन्छन र र त्यसको खोजीमा लागिरहन्छन । त्यो खोजीमा बिकृती पनि हुने गर्दछ । जस्तै मेरै नामबाट पनि फेसबुक आइडी खोलिएको थियो । मैले प्रहरी चौकी गएर उजुरी गरेर बन्द भयो ।
अरु धेरै बिकृती छन जस्तो एउटा टाउको अर्को फोटोमा जोड्ने । एउटाको चरित्र हत्या गरेर अर्को ठुलो बन्ने कुरा हो । यस्तो कसैले गर्नु हुँदैन । नायिका वा नेताहरुको फोटो अरुमा जोडेको देखिन्छ यस्तो प्रवित्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । म धेरै साथीहरुलाई सम्झाउँछु कि आज अरुको फोटो यसरी ट्याग गरियो भोलि त्यो हामीलाई नै पर्न सक्छ भनेर । नेताहरुलाई सचेत गर्नु जरुरी छ तर त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो ।
राजनीतिज्ञहरुको माझमा सोसल मिडियाको प्रयोग त्यति लोकप्रीय हुन सकेकोछैन, सही उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?
फेसबुक तथा अन्य सोसल मिडिया राजनैतिक व्यक्तित्वहरुले प्रयोग गर्नु जरुरी छ । आफुले गरेका कामहरु, आफुले उठाएका मुद्दाहरु , समाजमा भइरहेका घटनाहरु राख्नु जरुरी छ त्यो कम भएको छ । ठुला ठुला नेताहरु जस्तो अर्जुन नरसिंह के सि, गगन थापा, प्रदिप पौडेलले चलाउनु हुन्छ । नेताहरुले पनि राम्रै तरिकाले सुचना दिने माध्यम बनेको छ फेसबुक । तर यो अवसर सँगै चुनौती पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाईं टिवटर पनि चलाउनुहुन्छ । कसरी यसको प्रयोग गर्नु हुन्छ, कस्तो संदेश अभिव्यक्त गर्नु हुन्छ ?
म राजनिती र महिलाको बिषयलाई अलि धेरै जोड्न चाहन्छु त्यसमा । महिलाले भोगेको घटनाहरु, राजनितीमा भएको बिकृतीहरु, साथै भएका राम्रा कामहरुको बिषयमा लेख्न मन पराँउछु । अधिकांश बेलामा त्यस्तो विषय नभ्एको बेलामा आफ्नै खुशी र रमाइलोको लागि राख्छु ।
तपाईं सोसिअल मिडियामा आउनु भन्दा अगाडी, आइसकेपछीको पब्लिक फिगरमा कत्तिको अन्तर छ ?
मैले धेरै अन्तर पाएको छु । मैले दुइ महिनामा धेरै जिल्ला घुमेको छु । कति नचिनेको मान्छेले पनि दिदी तपाईं लाई फेसबुकमा चिनेको छु, मैले तपाईंको ब्लग हेरेको छु । म ताप्लेजुन्ङ पुग्दा पनि मेरो ब्लग हेरेको मान्छे भेट्टाएँ । हामी इलाम जादाँ मैले पढेको थिएँ यहाँ त इन्टर्नेटको सुबिधा छैन भन्नुभएको थियो । मलाई सोसियल मिडियाले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ । मलाई धेरै जसो मैले थाहा नपाएको कुरा फेसबुकबाट थाहा पाएको थिए, यस्तो अझै राख्नुस है भनेर मेसेजहरु आउने गर्छन । त्यो मेरो लागि पोजिटिभ कुरा हो त्यसले धेरै प्रभाव पारेको छ ।
कुनै न कुनै माध्यमबाट पब्लिकलाई सुसिचित गराइ राख्न जरुरी छ । किनभने सुचनाको हकबाट धेरै मानिसहरु बन्चित छन । मेरोरिपोर्टले युवाहरुलाई बढी समेटेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै युवाहरुले सुचना नपाउने र सुचनालाई नपछ्याउने परिपाटी छ मेरोरिपोर्टले टेवा टेवा पुर्याएको छ भन्ने लागेको छ ।
तपाई युवा बिद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, ससाजसेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ, युवाहरुको राजनिती प्रति वितृष्णा भएको पाइन्छ । अन्तमा युवाहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
फोहोर देखेर नाक थुनेर हिंड्नु सट्टा त्यसलाई सफा गर्नलाई सक्षम मानिसहरु जानुपर्छ । सक्षम मानिसले प्रयास गरेन भने असक्षम मानिसको दासी बन्नु पर्छ । युवाले आन्तरिक तथा बाह्य पोलिसी, विकास निर्माणका कुराहरुलाई अत्यन्त नजिकबाट बुझ्नु जरुरी छ । सबैले राजनिती गर्नु पर्छ भन्ने होईन तर बुझ्नु जरुरी छ । राजनिती भनेको के हो र राजनितीमा गइसके पछि हाम्रो मुद्दाहरुलाई कसरी लिइन्छ र सबैलाई एउटै थलोमा राख्न सक्ने नै राजनिती हो । कुनै पनि मुद्दालाई राजनितिकरण गर्न सकियो भने मात्रै त्यो बिषय सुल्झिन्छ । स्वभाविक नै हो अहिलेको देशको परिस्थितीले गर्दा युवा निराश भएको । राम्रो मान्छेले राजनिती गर्न जरुरी छ । बुझ्नु र गर्नु जरुरी छ ।
उर्मिलाको ब्लग लिङ्क : http://urmilathapaliya.blogspot.com/
Comment by Sudha Subedi on April 12, 2012 at 4:15pm
Congratulations Urmila Di!!! Really nice answers :)) keep it up and keep blogging! Good wishes :)
Comment by pramila thapaliya on April 12, 2012 at 12:38am
Comment by pramila thapaliya on April 12, 2012 at 12:37am
Comment by Niraj on April 11, 2012 at 9:58pm
Comment by Pagal Basti on April 11, 2012 at 8:04pm
बधाइ छ हाम्रो तर्फ बाट स्विकर होस
Comment by micromega on April 11, 2012 at 5:08pm
Comment by Binaya Shekhar on April 11, 2012 at 4:24pm
Congratulations. Very much useful thoughts you have in the interview. सोसल मिडियाको प्रभावकारी उपयोग र व्यवस्थापन तथा बिचारलाई प्रोत्साहन गर्ने माध्यमहरुको संरक्षणको लागि समयसान्दर्भिक नीति निर्माणमा तपाईजस्ता युवाको योगदान अपेक्षा गरिएकोछ । इन्टरनेटमार्फत गरिने सञ्चारलाई नियन्त्रणकारी भन्दा पनि नियमनकारी व्यवस्था हुनु राम्रो हो । यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यहाँहरुले छलफल चलाउनु हुनेछ जसले गर्दा इक्वल एक्सेसजस्ता संस्थाहरुले यस्ता सवाललाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनलाई सजिलो हुन्छ । फेरी पनि एकपटक बधाई, उर्मिलाजी । तपाईको सोसल मिडिया गतिबिधि निरन्तर जारी रहोस् ।
Comment by Amuna Chapagain on April 11, 2012 at 3:19pm
Comment by uma thapamagar on April 11, 2012 at 1:01pm
dherai dherai badhai cha urmila ji....
Comment by Indra Dhoj Kshetri on April 11, 2012 at 12:31pm
Comment by Kranti Darai on April 11, 2012 at 12:28pm
Congratulations DD, keep it up ..
Comment by Ajeeta Sigdel on April 11, 2012 at 12:05pm